Blog of Nyein Chan Yar: Blog in Burmese
The following text to see, this Myanmar zawgyi-one font you need.
ကျွန်တော် မြန်မာလို blog ရေးချင်နေခဲ့တာ ကြာပြီ။ အဲ့ဒါနဲ့Unicode ရှာပုံတော်ဖွင့် လိုက်တာ နောက်ဆုံး Myanmar1 ကတော့ "the one" ပဲ၊ ရေလည်မိုက်တယ်ပေါ့ ဆိုပြီ သုံးမယ်လို့ ကြံကာပဲရှိသေးတယ် blogger ရဲ့ script တစ်ချို့ ကြောင့် ထင်ပါတယ်၊ FF မှာ ကောင်းကောင်း render မလုပ်ဘူး၊ IE မှာတောင်ရတယ်။ FF မှာဆိုလည်း တခြားhosting / local မှာ အေးဆေးပဲ။
ahhhhh I'm typing sooooooooooo slowly in Burmese. gotta practice more.
so... that's the story of Myanmar1 font with me. But that font is really smart one. I'll talk about it later. Now I chose this zawgyi font for the time being. Reason one is for compatibility. (my blogger friends are using this). Reason two is that this is the most beautiful Myanmar Unicode font both in Burmese and English.
ဆက်ရေးလိုက်ပါအုံးမယ် မြန်မာလို၊ နှေးနှေးရိုက်တော့လည်း နှေးနှေး ဖတ်ပေးကြပေါ့၊ မရေးရင် မရေးဖြစ်ဘူးလေ၊ သိတယ်မို့ လား။ နောက်ပြီး ဝိုင်းဝိုင်း ဝိုင်းဝိုင်း နဲ့မြန်မာ စာလုံးတွေ ကိုယ့်blog ပေါ်မှာ မြင်ရတာ ပျော်စရာကြီး။
နောက်မှ .eot embedded font လည်းစမ်းကြည့်ရအုံးမယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက ဒီမှာ ကျွန်တော် သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ သူက IE မှာပဲရတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် IE သမားက 90% ရှိတာပဲ။ လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ပြဿနာက အဲ့ဒီ့ eot file ကို ဘယ်အရပ်မှာ သွားထားရမှန်း မှန်း မသိသေးဘူး။
Anyway, so far so good. Please get zawgyi-one and install if u still haven’t done it yet. I feel awkward to post Burmese as image u know...
Posted by dathana at Monday, January 30, 2006
dathana February 04, 2006 5:56 AM
eot embedded font activated. now Burmese fonts can be seen on any IE browser without zawgyi-one font installed.
Anonymous May 03, 2006 8:39 AM
hote tel.."wine wine wine wine nae..myanmar sar lone tway" internet paw mhar myin ya tar..pyaw sa yar gyi. the number of websites with burmese fonts are easily countable. really, it'sapleasure to read in burmese.